Tsiroanomandidy : nivadibadika ilay Sprinter, mpandeha 4 namoy ny ainy | NewsMada
Tsiroanomandidy : nivadibadika ilay Sprinter, mpandeha 4 namoy ny ainy
Tsy mbola tafavoaka ny tanànan’i Tsiroanomandidy akory ity taksiborosy Sprinter ity no izao namoa-doza izao, omaly maraina, raha nikasa hiakatra hankaty an-drenivohitra. Naratra mafy ny ankamaroan’ny mpandeha. Efatra no fantatra fa namoy ny ainy.
Ankoatra ireo efatra namoy ny ainy, valo hafa naratra mafy vokatr’ity lozam-piarakodia ity. Teo amin’ny tanànan’Ambohitsoa, 2 km miala an’i Tsiroanomandidy no nitrangan’ny loza. Taksiborosy mampitohy an’Antananarivo sy Tsiroanomandidy ity namoa-doza ity vokatry ny hafainganam-pandeha diso tafahoatra. Nikasa hihazo aty an-dRenivohitra ilay taksiborosy kanjo tra-doza tampoka. Araka ny fanazavan’ny mpandeha iray nahita ny fitrangan’ny loza, nandeha mafy loatra ny fiara ka tsy nahafehy ny familiana intsony ny mpamily ka izao nivadibadika. Tampoka tamin’ireo mpandeha ny fiavian’ny loza satria nisy tamin’izy ireo mbola tao anatin’ny torimaso. Vokany, maty tsy tra-drano ny efatra tamin’ireo mpandeha raha naratra mafy kosa ny valo tamin’ireo mpandeha miisa 18 nentin’ity taksiborosy Sprinter ity. Niongotra teo ambony tafon’ilay taksiborosy mihitsy ny fitoeran’entana nisy ny entan’ireo mpandeha. Nipitika ihany koa ny fitaratra lehibe manoloana ny mpamily. Nisy ireo mpandeha tafapitika avy ao anaty fiara noho ny fivadibadihan’ny fiara. Nandriaka eran’ny ra. Horakoraka tsy nisy toy izany ny an’ireo mpandeha rehetra tao anaty tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. Ireo mpandeha nipetraka tao aloha sy tamin’ny sisin’ny fiara no tena voa mafy. Niforitra mihitsy ny vatan’ilay taksiborosy.
Nentina haingana nihazo ny hopitalin’i Tsiroanomandidy ireo naratra. Torana tsy nahatsiaro tena avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha naratra. Nisy ireo voadona mafy teo amin’ny lohany sy ny tratrany, tao kosa ireo tapa-tongotra. Afa-nanohy ny dian’izy ireo niakatra taty an-drenivohitra ihany koa ireo mpandeha tsy naratra tamin’ity loza ity. Nohamafisin’ireo olona mahafantatra tsara ity lalana RN 1 ity fa matetika ahitana lozam-piarakodia hatrany ity lalana ity indrindra rehefa manakaiky toy izao ny fetin’ny Paka. Nampiaiky ny olona mihitsy fa rehefa alohan’ny fety toy izao dia misy ra mandriaka hatrany amin’ity lalana RN 1 ity indrindra fa eo amin’ny manodidina ilay toerana nitrangan’ny loza, omaly. Misy amin’ireo mponina sasany aza milaza mihitsy fa misy zavatra mampiahiahy eo amin’io toerana io.
Tena izay tokoa ve sa ny mpamily no tsy mahafehy lalana sy tsy mitandrina? Tsikaritra amin’ity taksiborosy ity koa fa mbola laharana vahiny no mipetaka amin’ny fiara, kanefa dia io izy efa afaka miasa io sahady. Ara-dalàna ve izany ? Ahina ho mbola tsy za-dalana ny mpamilin’ity taksiborosy ity ka ny mpandeha tsy manan-tsiny no mitondra faisana. Aiza ny fanaraha-maso ireny taksiborosy mifamezivezy eny amin’ny lalam-pirenena ireny? Manjaka ny kolikoly sy ny fandoavana ekolazy ka tafavoaka ihany ireo taksiborosy tsy mahafeno ny fepetra momba ny fitaterana olona? Manginy fotsiny ireo mangalatra mameno ety amin’ny sisin-dalana, saingy tsy misy mpahita ka toy izao no iafarany. Tonga nanao fanadihadiana teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny zandary ka notazonina nanaovana famotorana avy hatrany ny mpamilin’ity taksiborosy ity.